मिर्गौलाका घातक रोग केही मिनटमै पत्ता लगाउँने एप « Nepal Health News
मिर्गौलाका घातक रोग केही मिनटमै पत्ता लगाउँने एप
२०७६, २० श्रावण सोमबार ०४:२८ मा प्रकाशित
सेप्सिसजस्ता गम्भीर प्रकारको रोग लागेका बिरामीको मिर्गौलामा हानि पुग्न सक्छ। त्यस्तो समस्या प्राय: वृद्ध बिरामीहरूमा देखिन्छ।छिटो उपचार नगरे त्यसले अन्य अङ्गलाई पनि प्रभावित तुल्याउन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार गम्भीर प्रकारको मिर्गौलाको चोटपटकका कारण विश्वमा प्रत्येक वर्ष झन्डै १७ लाख मानिसको ज्यान जाने गर्छ।
स्ट्रीम्स नाम दिइएको सूचना प्रणाली रोयल फ्री अस्पतालले डीपमाइन्ड नामक प्रविधि फर्मसँग मिलेर बनाइएको हो। त्यसले काममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सरल सूचना र ग्राफहरू उपलब्ध गराउँछ। विभिन्न रक्तपरीक्षणको क्रममा क्रीएटनिन नामक खेर जाने तत्त्वको परिणामको मापन गरिन्छ। त्यसलाई मिर्गौलाले छानेर बाहिर निकाल्ने गर्छ। रगतमा हुने अन्य सूचकबारे पनि एपले तुरुन्तै स्वास्थ्यकर्मीलाई जानकारी गराउँछ।
त्यो विधिको विकास भएपछि उपचार खर्च निकै घटेको अस्पताल व्यवस्थापकहरूले बताएका छन्। रोयल फ्रीकी प्रमुख नर्स म्यारी एमर्सनले भनिन्, “यसरी अस्पतालका बिरामीहरूको अवस्थाबारे तत्कालै सूचना पाउने विधि एकदमै ठूलो परिवर्तन हो। यसले हामीलाई तत्कालै सूचना पाउन सजिलो भएको छ।”
यो नयाँ एप निकै उपयोगी हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्
एक परामर्शदाता चिकित्सक स्याली हामोरले यो परियोजना “जीवनरक्षक बन्न सक्ने” खालको भएको बताइन्। नयाँ अध्ययन प्रतिवेदन डीपमाइन्डले अमेरिकामा गरेको अध्ययनको प्रतिवेदनसँगै सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसमा अमेरिकाका सात लाख बिरामीको अवस्था पनि समेटिएको थियो। त्यसमा अझ उन्नत विधिको प्रयोग गरिएको थियो।
त्यसक्रममा रक्तपरीक्षण तथा मुटुको चाल र अन्य तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गरेर बिरामीहरूलाई मिर्गौलाको गम्भीर चोटपटक लाग्ने जोखिम भए नभएकोबारे अनुसन्धान गरिएको थियो। त्यसपछि त्यो कम्पनीले चिकित्सा अभ्यासमै उल्लेखनीय सुधार हुने सङ्केतहरू देखिएको दाबी गरेको छ। बीबीसीनेपालीबाट
कुन प्रविधिबाट कपाल प्रत्यारोपण गर्ने ?
आजकल तालुपनाबाट धेरै व्यक्ति पीडित छन् । तालुपनाका कारण कतिको बिवाह हुन सकेको छैन ।
अनावश्यक रौं बाट सदाका लागि मुक्ति !
के तपाईं अनुहार तथा शरीरका विभिन्न भागमा मन नपर्ने रौं पटकपटक निकाल्दा हैरान भइरहनुभएको छ
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स हस्पिटलमा न्युरो इन्टरभेन्सन (शल्यक्रिया नगरी गरिने उपचार) पद्धतिबाट ब्रेन
मध्य उमेरका महिलाले सेक्स डल प्रयोग गर्ने
जनस्वास्थ्य सरोकार । इंग्ल्यान्डको राजधानी लन्डनस्थित अर्पिङ्टनमा छ, द डल हाउस। यौन खेलौना बेच्ने विख्यात